Miyuu Koobka Qaramada Africa Ee Qiimaynta Hoose La Siiyaa Sadio Mane Kahor Istaagi Doonaa Ballon d'Or? Mane Qudhiisa Oo Hadlay & Cabasho Uu Muujiyay. - Gool24.Net
July 19, 2019 Apdihakem Omer Adem
Garabka kooxda Liverpool iyo xulka qaranka Senegal ee Sadio Mane ayaa wax laga weydiiyay arrimaha abaalmarinta Ballon d’Or oo mid kamida kuwa u tartamaya abaalmarintaas loo arko sanadkan.
Mane ayaa soo qaatay xilli ciyaareed aad u wanaagsan oo uu caawa soo gabo-gabayn doono marka uu Final-ka tartanka qaramada Africa hoggaamiyo xulkiisa oo Final-ka wajahaya Algeria.
Mane ayaa qayb weyn kasoo qaatay in xulkiisu uu soo gaadho heerkan isaga oo tartanka kasoo dhaliyay saddex gool ilaa haatan walow uu fursad uu laba gool oo kale ku dhalin lahaa rigoorayaal ku khasaariyay.
Dhinaca kale Sadio waxa uu Liverpool kula soo guuleystay koobka ugu xiisaha badan heer kooxeed ee UEFA Champions League isaga oo intaas ku daray inuu muhiim kasoo ahaa kooxdii Klopp ee booska labaad ka gashay kala sarreynta Premier League.
Haddii ay noqoto abaalmarinaha shaqsiga ah ayuu Mane kusoo guuleystay abaalmarinta kabta dahabka ah ee gool dhalinta horyaalka oo ay wadaageen Mohamed Salah iyo Aubameyang.
Si kastaba, Kaddib wax-qabadkaas la taaban karo ee uu soo sameeyay, Mane ayaa kamida shaqsiyaadka ugu cad cad ee tartanka adag sanadkan u gali doona hanashada Ballon d’Or.
Mane ayaa sheegay in ay qalad tahay in koobka qaramada Africa ee uu Final-kiisa joogo loo tix gelin waayo sida Euro ama Copa America isaga oo muujinaya dareenkiisa rabitaan ee Ballon d’Or maadaama oo koobkani noqonayo mid kamida hubabka uu ku tartami doono.
“Waxaan filayaa maaha wax caadi ah in AFCON aan loo tix gelin si lamid ah Copa America iyo Euro, Waa oohin qalbiga ah taas oo inaanu dhammaanteen samayno, Waa wax dhab ahaantii laga xishoodo, Iyadoo la adeegsanayo dhammaan ixtiraamka waa in la joojiyo”
Mohamed Salah, Virgil Van Dijk iyo Alisson Becker ayaa ah xiddigaha kale ee u tartami kara Ballon d’Or isla markaana Liverpool ka tirsan waxaana ay cadaadis saari doonaan Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo markale murashaxiin ah.